Mogadishu Journal » Gaari ay lahaayeen ciidamada AMISOM oo qarax lagula eegtay degmada Marka
Gaari ay lahaayeen ciidamada AMISOM oo qarax lagula eegtay degmada Marka
Mjournal : — Guddoomiyaha degmada Marka ee maamulka dowladda Soomaaliya Max’ed Cismaan Yariisoow ayaa sheegay in gaari ay lahaayeeen sida uu hadalka u dhigay ciidamada AMISOM [Booyad] lagu qaraxiyay degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha hoose.
“Gaariga waxaa uu ahaa nooca booyada ah oo ay lahaayeen ciidamada AMISOM, waxaa lagu qarxiyay degmada Marka gabi ahaan gaarigii waa burburay, askarigii wadayna waxaa soo gaaray dhaawacyo fudud,” ayuu yiri guddoomiyaha degmada Marko.
Laakiin ma uusan sheegin guddoomiyaha cid weerarka ka danbeysa, hasse ahaatee waxaa uu xusay in weerarradan oo kale ay yihiin kuwa ay Al-shabaab ka geystaan degmooyinka gobolka, ayna baaritaanno ku sameynayaan kooxihii fuliyay weerarkaas.
Gobolka Shabeellada Hoose ayaa deegaannada ay dowladdu kaga sugan tahay waxaa ka dhaca falal isugu jira qaraxyo iyo dilal qorsheysan oo ay geysanayaan xoogag taabacsan Al-shabaab.
Ilaa iyo hadda dhinaca kale marka aad eegto ma jiro wax war ah oo soo baxay dhinaca saraakiisha AMISOM ee ku sugan gobolka Shabeellaha hoose oo ka hadllaya weerarka laga sheegay in lagu bur buriyay gaari ay lahaayeen.
Diyaradaha Mareykanka ee Drones-ka oo dillay hogaamiyihii Taalibaanka dalka Pakistaan